GP Patient Survey – Somali
Ku Soo-dhowow barta Ra'yi-ururinta Bukaanka Dhakhtarka Guud (GP).
Ra'yi-ururinta Bukaanka Dhakhtarka Guud ayaa loo diray in ka badan hal milyan oo qof ku baahsan UK. Waxay fursad u siinaysaa dadku inay ra'yi-celin ka dhiibtaan dhakhtaatiirtooda guud. Dhakhtaatiirta guud ayaa u isticmaali karta natiijooyinka ra'yi-celinta si ay ugu horumariyaan waxayaabaha ay kala kulmaan bukaanku meheradahooda.
Haddii aad ku heshay boostada foom ra'yi-ururin waraaq ah, waxaan jecelnnahay inaad ka qaybqaadato arrinta. Awood uma lihin inaan degelka internetka oo idil dadka ugu fidinno luqado kale, hase yeeshee boggan ayaa bixinaya taageero loogu talgalay ku dhammaystirka ra'yi-celinta Af Soomaali.
Guji dusha xidhiidhiyeyaasha midgta ku yaal si aad marin ugu hesho nuqulka waraaqda aan kuu soo dirnay iyo xulasho su'aalaha badanaa la weyddiiyo oo Af Soomaali ah.
Waxa kale oo aad ku buuxin kartaa ra'yi ururinta internetkaaf Soomaaliahaan adiga oo gujiya xidhiidhiyaha midigta ku yaal. Waxaa lagu weyddiin doonaa inaad galiso lambarkaaga tixraaca iyo erey-furahaaga. Kuwaasi waxay ku yaalliin bogga ugu horreeya ee su'aalo-weyddiinta waraaqda ah.
Waxa kale oo waliba jira khadka caawinta oo aad ka heli kartid macluumaad dheeraad ah ooAf Soomaaliah ama ku dhammaystir su'aalaha taleefan ahaan haddii laguu doortay inaad ka qaybgasho.
Si aad arrimaha ugu warsatoaf Soomaali, fadlan wac 0800 819 9146.
Warqad tusaale ah
Su'aalaha inta badan isweydiiyo
Sahanka iminka waa la xirey